Fifohana sigara anaty fiara Nidongy ilay mpamily taksibe notenenina
Ny mpamily nifoka sigara notenenina indray no tezitra. Io no fototry ny olana ka nampisahotaka ireo mpandeha teo Analakely, afak’omaly tolakandro.
Vehivavy iray no nilaza fa tsy zakany ny fofona sigara ka nikitika azy io. Nisafoaka ilay mpamily ary io fikitihina io no lazainy fa tsy tantiny. Nanampy ilay tovovavy sy ny namany lehilahy ireo mpandeha nilaza fa tsy natao ho an’ny mpanjifa ihany ny soratra ambony fa ny mpamily ary ny mpanampy azy koa dia samy rarana ny fifohana sigara. Nidongy tsy nihetsika ilay mpitondra fiara raha tsy miala ireo mpivady. Samy niziriziry teo. Kinanjo niainga ihany afaka 15 minitra saingy tamim-pilongilongiana tanteraka. Rehefa miankindoha amin’ny sigara toy izao, tsy mahatsindry ny vatana, indrindra ny saina. Tsy vao izao akory no nahitana mpamily mifoka eny am-pandehanana, avoaka ny tanana an-kavia mitazona sigara sy ny loha rehefa hisintona kanefa ny setroka miditra amin’ny varavarankely. Rehefa hampakatra saran-dalana ihany matetika ny tompon’ny taksibe sy ny mpamily ary ny resevera no manaja ny mpandeha sy ny bokin’andraikitra. Fiteny mahazatra koa moa ny hoe : “Rehefa eny an-dalana mifoka sigara”